House of Assembly: Ụlọikpe enweghi ikike ịchụpụ m n'ọkwa Sịnetọ - Ogbuorji - BBC News Ìgbò
House of Assembly: Ụlọikpe enweghi ikike ịchụpụ m n'ọkwa Sịnetọ - Ogbuorji
19 Eprel 2019
Ụlọikpe enweghi ikike ịchụpụ m - Ogbuorji
Ebe foto si, National Assembly
Sunny Ogbuorji onye na-anọchite anya Ebonyi South n'ụlọomeiwu asaala okwu ọchụchụ ụlọikpe chụrụ ya dịka onye Sịnetọ.
O kwuru na ụlọikpe enweghi ike ịchụpụ ya n'ọkwa Sịneti kama na ọ bụ onyeisi ndị ụlọomeiwu nwere ikikere ime nke a.
Ihe dị mkpa pụtara na nrụrịtaụka Ebonyi steeti
Mgbe ndị Ebonyi mepụtara omenala Igbo
Ọ gara n'ihu kwuo na ọ gbaala akwụkwọ ikpe mkpegharị n'ụlọikpe 'Appeal' ka ha kwuo ma ikpe a ọ bụ ihe ziri ezi.
Ụlọikpe ukwu dị n'Abakaliki nke ọkaikpe Akintola Aluko nọ n'isi ya kwuru na Ogbuorji dara iwu Naịjirịa site n'ịwụpụ na pati ọ nọ nwete ọkwa bụ PDP ma banye APC.
Ụlọikpe a gara n'ihu sị ya kwụọ ụgwọ ihe niile oritere n'uru dịka ọ nọ n'ọkwa sịnetọ nke gụnyere ụgwọ ọnwa niile o riri.
Ndị kpọpụrụ ya n'ụlọikpe bụ Evo Ogbonna Anegu, Oti Ama Uche, Uche Richard, Una Sunday Okoro na Simon Ajali Ogbadu n'aha ha nakwa nke PDP Ebonyi Steeti.
Cheta na Sunny Ogbuorji ji aha pati APC zọọ ọkwa gọvanọ Ebonyi Steeti na ntuliaka afọ 2019.
Agwọ achụọla George Weah ọsọ n'obi gọọmentị Liberia
N'ihe dịka akụkọ ifo, onyeisiala mba Liberia bụ George Weah agbala ọsọ ụkwụ ete aja n'ụlọọrụ ya dịka a hụchara agwọ ojii abụọ n'obi gọọmentị mba ahụ.
Odeakwụkwọ mgbasa ozi ya bụ Smith Toby gwara BBC na a hụrụ agwọ ojii abụọ n'ụlọrụ ngalaba naz-ahụ maka ihe na-eme na mba dị ọzọ bụ ebe ụlọrụ Weah dị.
Ihe onyonyo onye Jamb nke sị na agwọ loro nde naira 36
Agwọ atụọla nwanyi n'ike n'ulo mposi
A kwụsịla onye JAMB boro agwọ ebubọ ọrụ n'ike
E nyekwara ozi ka ndị ọrụ niile kwụsị ịbịa ọrụ n'ụlọrụ ahụ rue abalị 21 nke ọnwa Eprelu.
Toby kwuru sị na "nke a bụ iji gba mbọ hụ na eji ọgwụ gbagbuo ihe niile na-akpụ akpụ na ihe na-arịgharị arịgharịa n'ụlọ ahụ."
Toby gbara ama na e gbulighị agwọ abụọ ahụ dịka ha gbakpuru n'ime ọnụ ebe ha siri bata.
Toby, onye gara n'ihu kọwaa n'ụlọ ahụ bụ ụlọ ochie kkwuru na Weah ga-alọghachi ụbọchị Monde ma ọ bụrụ na agbacha ọgwụ
Ụlọụka adaalagbuo mmadụ 13 ụbọchị 'Good Friday'
Ebe foto si, KZN EMS/ Arrive Alive
Mịnịsta na-ahụ maka ọrụ na Saụt-Afríka bụ Mildred Oliphant na-akwadobụ ịga emume 'Good Friday' n'ụlọụka ahụ
Otu ụlọụka adaala na mba Saụt-Afrịka dịka emume Easter na-ebido ma taa isis opekata mpe mmadụ dị 13. ụbọchị Fraide.
Ndị ọrụ gbagbata kwuru na e buhara mmadụ i29 n'ụlọgwụ dịka ụlọụka ahụ dara na mpaghara KwaZulu-Natal.
Akụkọ kwuru na aja ụlọụka 'Penticostal Holiness Church' dara dịka ha na-ebido emume 'Easter'.
Ndị uweojii kwuru na ọ bụ oke mmiri ozuzo zoro na mpaghara ahụ butere ya.
Nwoke ebepụla onwe ya mkpịsịaka
Otu nwoke India ebepụla mkpịsịaka ya n'iwe ka ọ chọpụtara na ya tụnyere pati abụghị uche ya na ntuliaka na-agan'ihu na mba ahụ ugbua.
Pawan Kumar,onye tụrụ vootu ya ụbọchị Tọzde tụnyere pati nọ n'ọchịchị bụ Bharatiya Janata Party(BJP) kama ị tụnyere patị Bahujan Samaj Party (BSP),nke ndị agbụrụ ya, ndị Dalit ndị na-ekwu na a na-akpagbu ha na Indịa na-akwado.
N'ihe nkiri na-efeghatrị n'ịntanet, Kumar kwuru sịrị, "Achọrọ m ibinye aka ebe e sere enyi mana binye aka na ebe e sere flawa na amaghị ama."
Akara njirimara pati BJP bụ enyi, ebe nke BSP bụ flawa.
Praim Minista mba Mali achịsala ọwa
Praim Minista mba Mali bụ Soumeylou Boubeye Maiga na ndị ọchịchị ya etinyela akwụkwọ arụkwaghị ụbọchị Tọzde dịka ngagharịiwe sochiri tigbuo zogbuo nke tara isi mmadụ otu nari na iri na mpaghara Mopti dị n'agbata ha na Burkina Faso.
Puku kwuru puku ndị mmadụ mere ngagharịiwe n'abalị ise nke ọnwa Eprelu dịka e gbuchara ihe mmadụ were na-ekwu na gọọmenti emeghị ihe kwesiri ka o me iji kwụsị tigbuo zogbuo ebe ahụ.
Easter Celebration: Buhari ekelela ndị otu ụka Kraistị
Onyeisiala Naijiria bụ Muhammadu Buhari ezigarala ndị otu ụka Kraist Naijiria ozi ekele dịka emume Easter na- akpụrụ ọkụ n'ọnụ ma kpoo oku ka ha ṅomie agwa Christ site na-egosi ihunaya, umeala na ndidi.
Buhari onye kwere nkwa na ọchichị ya ga-akwado ndị ọrụ nchekwa n'ụzọ pụrụ iche iji hụ na nsogbu ntọ,ndị ohi nakwa ndị na-eyi ndụ egwu bịara n'isi njedebe kpọrọ ndị otu Kraist okpu ka ha kpesie ekpere ike ka udo lọghachi n'ala Naijiria.
Ndị uweojii Enugwu anaghị achị
Ọtụtụ mmadu na-akato oke ogbugbu mmadu ndị uweojii na-eme
Ndị uweojii na Enugwu Steeti ewepụtarala ndị omekome anya ha ji anyụ nsị dika ha hiwere atụmatụ pụrụ iche ha kpọro 'Operation Puff-Adder' na bekee maka ịwa agba ndị ntọ na ndị ojiegbeeezu na-akpa ike steeti ahụ agba ọkachasị n'okporoụzọ Affa Egede, Umulokpa nakwa ụzọ Affa Technical School .
A kpụla onye nchịkọta otu egwu bọọlụ United Football Club of Nnewi bụ Olisa Onuchukwu, ụlọikpe ukwu nke etiti dị n'Oka Anambara steeti maka iji magomagọ napụ otu ojiegoachụ egọ a kpọrọ Ndubuisi Nwobu ego ruru nde Naira abụọ na ụma bụ ego o kwuru ya ga-eji ezipụ ndị na-eto eto ala bekee maka ịgba bọọlụ.
Sudan: Ndịagha ewerela ọnọdụ ọchịchị ugbua
Ndị mmadụ na-ebe akwa, na-eme mmemme, na enwe aṅụrị...etu ndị Sudan si nabata iwepu Onyeisiala Bashir n'ike.
11 Eprel 2019
Ada Jesus dị afọ 23 alaala mmụọ